Q.Midoobay iyo dowladaha reergalbeedka oo Shaqaalahooda ka daad guraysanaya dalka Itoobiya.
Wednesday November 24, 2021 - 10:55:55
Intabadan dowladaha reergalbeedka iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa ku dhawaaqay in shaqaalahooda iyo muwaadiniintooda ay ka daadguraynayaan dalka Itoobiya ee dhaca bariga Afrika.
Stéphane Dujarric oo afhayeenka Q.Midoobay ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen daad guraynta shaqaalahooda ku sugan magaalada Addis Ababa iyo Itoobiya inteeda kale kadib markii ay dagaalladu kusoo dhowaadeen caasimadda.
Shaqaalaha muhiimka ah ayaa dib loogu celinayaa wadamadooda halka kuwa kale lageynayo Jabuuti iyo Kenya si ay halkaas ugasii wadaan shaqadii ay Itoobiya ka hayeen.
Waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa sabab uga dhigtay labixitaanka shaqaalaheeda caalamiga ah ee Itoobiya dagaallada sii xoogeysanaya in mucaaradka oo kusoo dhowaaday Addis Ababa.
Dhinaca kale Faransiiska iyo Jarmalka ayaa amar kusiiyay muwaadiniintooda Itoobiya ku sugan in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan, Paris Berlin ayaa digniino ay soo saareen ku sheegay in khatar weyn ay kusoo foolleedahay Itoobiya sidaas daraadeed ay muwaadiniintooda amar kusiinayaan in ay isaga baxaan wadanka.
Jeffrey D. Feltman oo ah ergayga Mareykanka uqaabilsan geeska Afrika ayaa isna markale walaac ka muujiyay xaaladda Itoobiya, wuxuu carabaabay in colaadda oo sii xoogeysanaysa ay meesha kasii saarayso fursadihii wadahadal lagu dhax dhigi lahaa dhinacyada is haya.
Abiy Axmed ayaa shalay booqday furimaha dagaalka isagoona ugu baaqay shacabka Xabashida in ay isbarbar taagaan ciidamada federaaliga ah ee dagaalka kula jira fallaagada TPLF iyo xulufadeeda OLA.
Dagaal culus oo xalay ka dhacay Jaziiradda Kudhaa ee dalka Soomaaliya.
dowladda Itoobiya oo dalkeeda ka cayrisay diblumaasiyiin u dhashay dalka Ireland.
Caabuqa Corona Virus oo dalka Jarmalka ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof.